संकटमा आर्यन र प्रियंकाको ‘बटरफ्लाई’ « Ramailo छ
संकटमा आर्यन र प्रियंकाको ‘बटरफ्लाई’
समय : 8:42 am
यही पौष २८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म हो, ‘बटरफ्लाई’ । ‘बटरफ्लाई’ अर्थात् ‘मायाका रंगहरु’मा चिनिएका अनुहारको अभिनय छ । प्रियंका कार्की, आर्यन अधिकारी र अर्पण थापाले फिल्ममा मुख्य भूमिका निभाएका छन् । तर प्रचार प्रसार भने शून्य छ । किन त ?
किनकी कलाकारको व्यस्तताले ‘बटरफ्लाई’ संकटमा परिरहेको छ । नायिका प्रियंका कार्की केही दिन अगाडीसम्म फिल्म ‘लिलिबिलि’ का लागि युरोपमा थिइन् । उनी भर्खर नेपाल आएकी हुन् । ‘न्यू ईयर सेलिव्रेसन’ गर्न प्रेमीसँग पोखरा पुगेकी प्रियंकाले के बाँकी समय ‘बटरफ्लाई’ का लागि छ्ट्याएकी होलिन् ? यता नायक आर्यन अधिकारी डेढ महिना अगाडीदेखि फिल्म ‘बाँध मायाले’ को छायाँकनका लागि नवलपरासीमा छन् । उनी चाहेर पनि फिल्मको प्रचार प्रसारमा हिंड्न पाइरहेका छैनन् । प्रोमो :
अर्पण थापा प्रायः फिल्मको प्रचार सहभागी हुँदैनन् । यसकारण प्रदर्शन मिति नजिकिंदै गर्दा पनि फिल्मले ‘हाइप’ सृजना गर्न सकिरहेको छैन् । ओम प्रतिक गुरुङ निर्देशित फिल्मको ‘म गाउँदिन गीत गजल’ बोलको गीतले भने दर्शक तथा श्रोताको मन जितिरहेको छ । गीत :